HIM | Health in Myanmar » 2014 » October
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ‘တက်ဆပ်စ်’ ပြည်နယ်၊ ‘ဒါးလပ်စ်’ မှာ HIV ပိုးရှိသူ အမျိုးသမီးတယောက် အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။ အသက် ၂၅ နှစ်ရှိတဲ့ ‘ဒိုင်းမွန်း လောရင့်စ်’ ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးက ‘ဝေါလ်-မတ်’ ဆိုင်က အေးခဲထားတဲ့ ၁၁ ဒေါ်လာတန် အစားအသောက်ကို မသိအောင်ယူဘို့ကြိုးစာတဲ့အခါ ဆိုင်ဝန်ထမ်းနဲ့ စကားများပါတယ်။ ရန်ဖြစ်တဲ့ ဆိုင်ဝန်ထမ်းကို သူမက HIV ပိုးပါနေတဲ့သွေးနဲ့ ကူးစက်အောင်လုပ်ပြီး ရန်ပြုဘို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ ကုပ်ခြစ်ခံရတဲ့ မျက်နှာဘယ်ဘက်ခြမ်းက ဒဏ်ရာကို ဆေးကုသမှုခံယူရပါတယ်။ ကူးစက်မဲ့ပုံတောမရပါ။
DR TB in Myanmar
Here isanotice ofapress release on drug resistant tuberculosis in Myanmar. Any response from the 3MDG Fund? No attachments on HIV Information for Myanmar [him] http://www.hivinfo4mm.org but you can get the press release from MSF. Jamie ++++++++++++++++++ Please find attached in both English and Myanmar Languagesapress release from MSF Myanmar […]
MARP creep in action
If you want to see an example of “MARP creep” in action, read this. Looks like ADB staff cannot get movement out of their heads. http://www.aidsdatahub.org/sites/default/files/publication/PolicyBrief_Health_HIV_and_Lobour_Migration_GMS_Myanmar_2014.pdf Jamie
It would be good to seeahigh quality analysis of the two health problems: alcohol use disorder and substance use disorder in Myanmar. If most of the alcohol that the young drink is ‘illegally distilled’ then what are the authorities going to do about it? Harry banned tobacco advertising with one stroke of his […]
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmarno comments | Tags: HIV, STD, ပညာပေး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
CDC 2010 ရဲ့ STD လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါ ဆေးလမ်းညွှန်မှာလဲ ထိရောက်တယ်လို့ ဆိုထားတယ်။ တချို့ ဆေးယဉ်တာလဲတွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် ပနယ်စလင် နဲ့ Doxycycline သုံးမဖြစ်မှသာ Azithromycin ကို ပေးသင့်တယ်။ လိင်တူဆက်ဆံသူတွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ ကိုတော့ Azithromycin မပေးသင့်ပါ။ ဆေး ကုသမှုရဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး Jarisch-Herxheimer reaction ဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်။ ဆေးပေးကာစ ၁ နာရီကနေ တရက် အတွင်းဖြစ်နိုင်တယ်။
Health products as change
This article makes it sound as if giving sterile syringes as change isabad thing. It isagreat idea. Condoms would be better than sweets or cigarettes. And sterile water is useful to many people. Imagine giving out health products as change around the world … Jamie ++++++++++++++++++ Heroin use is so high […]
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmarno comments | Tags: HIV, ကလေး, ပညာပေး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်း HIV ရှိ-မရှိ စမ်းသပ်ရမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာစကတည်းက ပိုးရှိနေတာသိရင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘို့ ပိုကောင်းတယ်။ ကလေးကို မကူးစေအောင်ဆောင်ရွက်ဘို့ အချိန်ပိုရလို့ကောင်းတယ်။ သူ့ခင်ပွန်းအတွက်လဲ မတူးအောင် လုပ်ဘို့လိုတယ်။ ပိုးဟာ သွေး၊ ကိုယ်ခန္ဓာကထွက်တဲ့ အရည် (ယောက်ျား စီမင်၊ မိန်းမ ဗဂျိုင်းနား အရည်၊ နို့ရည်) တွေနဲ့ ပိုးရှိမိခင်ကနေ မွေးလာမဲ့ကလေးကို ကူးနည်းတွေနဲ့ ကူးစက်တယ်။ လိင်လမ်းကနေ ကူးတာက အများဆုံးဖြစ်တယ်။
INGO forum online
The INGO forum is now online. ingoforummyanmar.org Jamie
"US flexes diplomatic muscle in Myanmar"
There isanew report by the US Center for Strategic and International Studies. You can download and read it at http://csis.org/files/publication/141019_Morrison_Myanmar_Web.pdf. It says “Myanmar citizens have begun at long last to see important gains in HIV/AIDS prevention”. In fact most of the gains in HIV prevention began ten years ago and occurred before reforms. […]
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: AIDS, HIV, SW, လူကုန်ကူး
ယိုးဒယားက ပက်ပုံးလို အမျိုးသားရေးသိက္ခာကျတဲ့အထိ ထင်ရာမြင်ရာလျှောက်လုပ်ခွင့်ပေးဖို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ စည်းနဲ့၊ ကမ်းနဲ့ စနစ်တကျ မှတ်ပုံ တင်ပြီး အကာအကွယ်ပေးဖို့ပြောတာပါ။ အဲဒီလို အကာအကွယ်ပေးထားရင် သူတို့ကို အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်လို့ မရနိုင်တော့ သလို တစ်ဖက်က ကြည့်ရင်လည်း HIV/AIDS Prevention အတွက် အထောက် အကူအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။